I-sedona yimoto ekhethekile yomndeni | Isolezwe
I-sedona yimoto ekhethekile yomndeni
Isolezwe / 12 July 2012, 12:05pm /
IZINTO eziningi zisebenza ngogesi kwi Kia Sedona kusukela ezicabheni ezingama sliding doors nesangemuva kwi tailgate. Ubukhosi bemoto yomndeni ekwazi ukulayisha abantu abayisithupha nemithwalo yabo
IMOTO: KIA SEDONA
INTENGO: R419 995
UKHUZA ukhuzile kubantu uma uhamba nge Kia Sedona uzama ukubatshela ukuthi bangazivuleli izicabha zangemuva, ngoba zivulwa ziphinde zivalwe ngebhathini. Ngiyakuqonda ukuthi igenge yakithi eningi ijwayele amatekisi, kodwa leli itekisi elihlukile elinezinto eziningi ezisebenza ngogesi. Abantu abanemindeni emikhulu nohide labangani njengami iSedona iyona moto engilungele. Isikhathi sokuvivinywa kwe Sedona singifikele kahle ngothiwe izinsizwa zami kanye nenqwaba yabazala nabashana kwabe izithelile.
Phela akuyona imoto ocabanga ukuthi ungaqengqeleza wedwa phakathi kuyo lena ngoba angeke ubuzwe ubumnandi bayo.
ISedona VQ 7 inezihlalo ezanele abantu abayisikhombisa.
Ngithe ngiyithatha kunguLwesihlanu kwaba khona uhambo oluphuthumayo. Iziphuzo ezibandayo, kodwa ezivumelekile emgwaqeni bezingeke zisale ngaphandle. Ngisayiqhoqhobele ngizwe umshana wami “uGauteng” obehleli ngemuva esezincomela ukuthi unendawo yakhe esathileyi yokubeka “izidlo” abeziqhabula kancane.
ISedona ungakwazi ukuthi uyivule amatafula nidlele kuyo ngaphandle kokuphazamisa umshayeli
Le Sedona ingena esikhaleni sendala okwaba ngeyokuqala ukwethulwa eNingizimu Afrika, i-2.9 Diesel model. I-Sedona entsha itholakala ngenjini engu-2.2 litre esebenzisa udizili, ngiyayivuma futhi ngoba iyonga. Le njini ikhiqiza amandla afinyelela ku 143kW, bese ikunika i-torque engu 436Nm. Le njini iyi Common Rail Turbo-charged, kanti inamandla athe thuthu lase lehla nezinga lomsindo wayo nakuba kuyinjini enkulu.
Kube kuhle kwaKia benze uhlobo olulodwa luka-gearbox odonsa ngamagiya ayisithupha ongumshini ozishintshayo.
Phela lena yimoto engadingi ukuthi ulokhu uzixaka ubondana namagiya ngoba iwubukhosi futhi yakhelwe inkululeko.
Uma usungumuntu womndeni iyona moto yenkululeko iSedona ngoba nesikhala sokulayisha impahla basandisile kulena.
Njengoba kuyimoto eyakhelwe ikakhulukazi imindeni bekulindelekile ukuthi kwaKia bagxile nasezintweni ezihambisana nokuzithokozisa
njengeBluetooth okwazi ukuyilawula ngebhathini elisesteringini. Ukuqoqela zonke izinto esiteringini kusiza umshayeli ekutheni angasusi amehlo emgwaqweni. Ezinye izinto ezikhona umsakazo odlala amaCD neMP 3, kanti uyakwazi nokuxhuma i-USB.
Okunye okukhona kule Sedona okuhlukile isicabha sangemuva esisebenza ngogesi.
Lesi sicabha sivulwa ngokucindezela ibhathini kwiremote control kanti uma ususivala uphinde ucindezele ibhathini kuso.
Njengoba sesike sasho ukuthi iSedona VQ ibiza R419 995, le ntengo ihambisana ne-warranty yeminyaka emihlanu emuva kuka 100 000 km kanye ne-maintennance plan yeminyaka emihlanu emuva kuka 100 000.
Labo abakwazile ukuthenga le moto ngesikhathi ifika ngoFebhuwari babe senhlanhleni yokuthi bayithole ifakelwe i-towbar iphinde ihambisanen ne-trailer encanyana konke ngo-R13 000.
Le Kia Sedona ikwazi ukulayisha abantu abayisikhombisa bahlale ngokukhululeka, kanti ngemuva sikhulu nesikhala sokubeka impahla.
Izinto eziningi kule moto zisebenza ngogesi njengesicabha sangemuva, ezinhlangothini ama sliding doors obekwenza ngikhuze ngikhuzile abantu befuna ukuzivulela izicabha, kanti lokho kuyawulimaza umshini wokuzihambisa.